Dachshund Timo Dheer: Maxaa Laga Ogaanayaa Dachshund-kan cajiibka ah - Taranka
Dachshund Timo Dheer: Maxaa Laga Ogaanayaa Dachshund-kan cajiibka ah
Dhamaanba noocyada kala duwan ee Dachshund Dharka dhaadheer ee Dachshund waa kuwa ugu quruxda badan dhammaantood.
Qulqulkaan yar ee quruxda badan wuxuu la yimaadaa shaqsiyad weyn iyo dhogor dheer oo raaxo leh.
In kasta oo saabuskan qaabdhismeedkiisu u eg yahay mid aad u qosol badan haddana lama dhayalsan karo. Dachshund waa ugaarsade dhashay oo leh dabeecad kulul oo feydan ah si uu ula mid noqdo.
Miyaad u maleyneysaa in Dachshund Timo Dheer uu noqon karo saaxiibka dhogorta ugu fiican adiga?
Sii wad akhriska si aad u barato wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan ardaygan yar ee quruxda badan ...
Dhatshund Timo Dheer Oo Jaleeco
Guudmarka Dachshund Timo Dheer
Immisa ayey Leedahay Qiimaha Dachshund Timaha Dheer?
Muuqaalka Eyga Dachshund Timo Dheer
Tilmaamaha Daryeelka Dachshund Timaha Dheer
Sida Loo Tababaro Ey Dachshund Ey Dheer Ah
The Long Haired Dachshund waa eey yar yar oo wiyer leh oo timo dhaadheer oo duufsan leh.
Dachshunds waa ugaarsi guri aad loo jecel yahay maxaa yeelay waa mid ka mid ah ugaarsadayaasha ugaarsiga ee aadka ugu habboon qaab nololeedka guriga. Tarankaani waa mid caan ku ah dadka ku nool magaalooyinka waaweyn maadaama ay si wanaagsan ula qabsadeen inay ku noolaadaan gudaha laakiin wali waxay ku kobcaan banaanka.
Caannimada: # 12.
Gaarka ah: Ugaadhsiga ugaarsiga.
Miisaanka: 11-32 rodol
Qiimo: $ 300- $ 1500.
Shakhsiyadda: Feisty, madaxbannaan iyo feejignaan.
Qiimo : $ 500- $ 1000
Nolosha qofka : 10-15 sano
Cabir : 22-35 rodol
Qiimo : $ 700- $ 1000
Nolosha qofka : 12-13 sano
Cabir : 40-80 rodol
Daadiyay : Dhexdhexaad / Sare
Timo Dheer Dachshund
Qiimo : $ 300- $ 1500
Cabir : 11-32 rodol
Dachshund wuxuu leeyahay saddex nooc oo jaakad ah:
Dachshunds timo dhaadheer ayaa ah nooca ugu caansan Dachshund sababtoo ah dhogorta dhaadheer ee quruxda badan.
Waxay ahaayeen asal ahaan la kariyay 600 oo sano ka hor si ay u ugaarsadaan calaamadaha si kastaba ha noqotee hadda waa ilaaliyeyaal guri oo kaamil ah.
Baaxaddooda ku habboon iyo awoodda ay ula qabsan karaan nolosha gudaha ayaa ka dhigtay inay aad u jecel yihiin dadka ku nool magaalada.
Dabcan waxaa lagu qeexay lugaha gaagaaban ee gaaban iyo qaabka sausage ee caanka ah. Ma jiraan wax ka xiiso badan oo aan ka ahayn daawashada wiyer wiyer oo lugahooda yar ku wareegaya.
In kastoo saxaradan ayaa leh jidh yar waxay leeyihiin shakhsiyad aad u weyn. Iyagu waa kuwo caqli badan oo fikir ahaan u qaba sida qof yar oo waxay maraan niyadda badan oo kala duwan maalintii oo dhan.
Timahooda dhaadheer iyo kuwa ruxruxaa ayaa ka duwan kuwa kale ee Dachshunds.
Waxay ubaahan yihiin habeyn xoogan si ay ugu ekaadaan sida ugufiican.
Haysashada Dachshund farxad waxay noqon kartaa caqabad laakiin haddii aad maamuli karto waxaa lagugu abaalmarin doonaa foosha aad loo jecel yahay.
Ku noolaan karaan guryaha yaryar.
Ilaalin aad u feejigan
Waxay si fiican ula qabsataa nolosha gudaha.
Waxay labadaba ka dhigtaa eey dhabta dhabta ah.
Niyad iyo dabeecad aan la saadaalin karin.
Way adkaan kartaa in la tababaro.
Aan la heshiin carruurta ama eeyaha kale.
Aroorta Dachshund-kaaga Timo Dheer waxay kici doonaan waqtigooda.
Maalmaha qaarkood waxay rabaan inay kula soo toosaan, laakiin maalmaha kale waxay rabaan inay ku seexdaan. Waxaa fiican inaad ka tagto ilmahaaga kaligaa illaa ay diyaar u yihiin inay bilaabaan maalintooda.
Mar alla markay ku fiicnaadaan inay baxaan waxay sanka dheeri kaa dhigayaan wejigaaga si ay kuu ogeysiiyaan inay tahay waqtigii aad soo kici lahayd.
Quraacda ka dib waa wakhti aad tamashle u baxdo.
Hal safar oo hareeraha guriga ah waa inay ka caawisaa gubida tamarta subaxa.
Hadda way ku nasan karaan santuuqa ay ku shaqeeyaan waxaad aadi doontaa shaqo.
Waxaad u baahan doontaa inaad u yeelatid fadhiistaha ardaygaaga si aad u soo gasho oo aad u hubiso iyaga waqti ka waqti. Waxay dareemi doonaan badbaado aad u badan iyagoo og in qof daryeeli doono intaad maqan tahay.
Qashinkaaga ayaa aad ugu farxi doona inuu ku arko marka aad guriga timaaddo.
Waxay ku sugayeen maalinta oo dhan inaad ka saarto tacabir weyn.
Sii Dachshund-kaaga galabtooda cuntada ka dibna u kaxee ciyaar xamaasad leh oo qarsoodi ah oo raadiya. Ku dhammee maalinta socod kale oo hareeraha guriga ah oo labadiinuba waxay diyaar u yihiin inay nastaan. Markuu cunuggaagu dhammaantood daalan yahay waxay si naxariis leh u raadin doonaan dhabtaada oo ah meesha ugu fiican ee lagu nasto oo lagu nasto. Labadiinaba waad isku koolkoolin kartaan ilaa sariirta la gaadhayo.
Waqtiga jiifka Dachshund-kaagu wuxuu ku dhex gurguuran doonaa gacmahaaga si labadiinuba ay u wada jilcaan habeenkii oo dhan. Aroortii waxay diyaar u noqon doonaan maalin kale oo xiiso leh!
Taariikhda noocani waxay dib ugu noqonaysaa 600 oo sano.
Dachshund, ama eyga badger, waxaa loo adeegsaday ugaarsiga badgerka dalkooda Jarmalka.
Inkastoo muuqaalkooda muuqaalka wiener uu yahay mid qosol leh oo runtii u muuqda u adeegtay ujeedo wax ku ool ah .
Ey dheer oo caato ah ayaa loo baahday si uu ugu siibto godka badger. Sidoo kale sababta oo ah Badgers waxay ku nool yihiin godad dhulka hoostiisa ah oo loo yaqaan 'setts', eeyga ugaarsiga baajiska wanaagsan waa inuu ahaado mid aan dheereyn oo dhudhun mooyee sidoo kale aad ugu fiican qodidda.
Markii ugaarsiga bajaajta uu ka dhacay fadligii, xirmooyin eeyo ah ayaa loo isticmaali jiray in lagu ugaadhsado xitaa ugaarsiga ka weyn. Awooddooda ay ku soo saari karaan dawacooyinka iyo xitaa xayawaanka duurjoogta ah ayaa ku kasbaday meel ka baxsan Jarmalka.
Kadib qarnigii 19-aad tarankaani wuxuu caan ku noqday wehel wadaaga guriga iyo ilaalin shaqsiyeed.
Dadku si dhakhso leh ayey jacayl ula yeesheen qaabkooda majaajillada ah iyo shakhsiyadda aadamaha u eg.
Noocyada jaakadaha kala duwan (sida timo dhaadheer) ayaa loo soo saaray natiijada caansanaanta cusub ee taranka. Dadka waaweyn ee magaalada degan waxay doonayeen saqaf qurux badan oo muuqaal ah oo waliba ilaalin kara gurigooda.
Naadiga Kennelka Mareykanka waxaa la aasaasay 1884.
Hal sano uun ka dib Dachshund wuxuu noqday mid ka mid ah eygii ugu horreeyay ee hela aqoonsi rasmi ah.
Tan iyo markaas caannimadan caan ah ayaa sii kordheysay. Waxaa lagu qiimeeyaa quruxdooda waxaana had iyo jeer lagu muujiyaa bandhigyada eyga.
Magaca Dachshund macnihiisu waa eeyga badger ee ku jira afkiisa hooyo.
Dachshunds kaliya waxay jecel yihiin qodista waxayna aad ugu fiican yihiin urinta alaabada caruurtu ku ciyaarto ee ay aaseen. Xirfaddani waxay ka timaaddaa taariikhdooda dheer ee ay ku qodeen godadka badger.
Waxay sameeyaan eeyo show cajiib ah. Noocyada timo dhaadheer gaar ahaan gaar ahaan waxaa lagu qiimeeyaa quruxdooda darteed.
Ku noqoshada dalkooda Jarmalka noocyadan waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin astaan ​​qaran runtiina waxay ahayd mascorkoodii rasmiga ahaa intii lagu jiray ciyaarihii Olimbikada ee 1972 Munich.
Eeyadan yaryar ayaa aad u xun marka loo eego cabirkooda. Taariikhdooda ugaarsiga baakado eeydan ah ayaa buuxin kara oo hoos u dhigi kara bajaaj ama xitaa digaag duurjoogta ah.
Ey yar ayay xirxiraan dabeecad aad u weyn .
Waa wax lagu qoslo inta ay le'eg tahay sida qof yar oo dhogor badan oo noocani runtii yahay.
Sida aadanaha oo kale runtii ma ogaan kartid sida eeygaaga niyadiisu noqon doonto maalin ilaa maalin.
Dachshund Timo Dheer wuxuu noqon karaa mid xasilloon oo faraxsan maalin uun oo riixi kara oo xanaaqsan maalinta xigta. Qashin-qubkaagu wuxuu umuuqdaa mid adag in la aqriyo laakiin marwalba waxaa jira sabab ku saabsan isbeddellada niyadda.
Dachshund-kaaga ayaa laga yaabaa inuu naaska ama qaniino haddii ay xaalad xun ku jiraan. Waa inaad ixtiraamtaa xuduudaha eeygaaga oo aad siisaa xoogaa meel ah markii aysan doonaynin inay qasaan.
Burbur badan ama dhaqan xun waa caajis ama dayac.
Fahmitaanka dabeecadda eyga maalin kasta iyo isbeddelada lama filaanka ah ee dabeecadda ayaa ka mid ah xirfadaha badan ee aad u baahan doonto inaad horumariso haddii aad rabto inaad ilaaliso Dachshund Timo Dheer.
Dachshunds uma baahna jimicsi xoog leh maxaa yeelay taasi waxay dhaawici kartaa lafdhabarta.
Hase yeeshee ugaarsigii ugaarsiga dartiis waxay weli u baahan yihiin ugu yaraan waxqabad yar maalin kasta.
Qashin-qubkaani waa mid aad u sheekeysan - ardaydan fikradaha leh waxay jecel yihiin oo keliya inay yeeshaan wadahadallo dhaadheer oo milkiilayaashooda ah.
Waxay sidoo kale aad uga walwalaan dadka shisheeyaha ah taasoo ka dhigeysa is dhexgalka bulshada mid aad u adag. Dufan walaacsan ayaa laga yaabaa inuu xishood badan yahay ama aad u af badan yahay dadka kale. Bulsheyntu waxay qaadataa sabir badan waana in lagaa sameeyaa adiga dhinaca cunugga marwalba (inbadan ka dib).
Sababtoo ah lafdhabarta jilicsan waa inaanay carruurtu qaban karin oo ay tahay in lagu ciyaaro kaliya iyada oo la kormeerayo.
Ma qadarinayaan wax ka qabashada xun ama ciyaarta buuqa badan.
Asxaabtooda ugu fiican ayaa ah eyda la midka ah ee iskood u qaban kara. Eeyo waaweyn oo firfircoon ama nooc Toy oo xasaasi ah waa in laga fogaadaa.
Nasiib wanaagse noocani waa mid la yaab leh oo la awoodi karo.
Waa inaad ka filan ku bixi inta udhaxeysa $ 300- $ 1000 ee Ey Dheer Dachshund.
Noocyo yar yar ayaa ku kacaya waxoogaa ka badan inta u dhexeysa $ 700 - $ 1500.
Nasiib darro waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah Dachshunds guryaha hoyga ah maxaa yeelay milkiilayaasha qaar ayaan diyaar u ahayn ciilkooda iyo isbeddellada niyadda.
Haddii aad ka korsato hoyga waxaad ku bixin doontaa qiyaastii $ 250 oo ah khidmada korsashada.
Ey $ 300- $ 1500
Dadka waaweyn $ 300- $ 900
Korsasho $ 200- $ 350
Kahor intaadan iibsan Dachshund-kaaga Timaha dheer waxaad ubaahantahay inaad go aansato cabirka ugufiican ee aad ku nooshahay. Haddii aad ku nooshahay guri yar markaa waxaad u baahan kartaa inaad doorato mid yar oo Dachshund ah halkii aad ka dooran lahayd mid xajmikiisu le'eg yahay.
Haddii aad doorato Dachshund yar markaa waxaad u baahan doontaa inaad wax badan ka bixiso cabbirkan gaarka ah. Eeyaha yaryari waxay socodsadaan qiyaastii $ 400- $ 1000 in ka badan dhiggooda cabirkoodu caadiga yahay.
Tani ma aha eey qaali ah oo la iibsado laakiin miisaaniyaddaadu kuma hakaneyso iibsiga cunugga. Dachshunds Timo Dheer ayaa inta badan u baahan qurxin gaar ah, daryeelka caafimaadka xoolaha iyo nafaqada taas oo ku kici karta boqolaal doolar oo dheeri ah bil kasta.
Dufan leh timo qaro weyn oo ruxruxsan ayaa u baahan kal-fadhi dhammaystiran oo qurxin ah mar kasta si ay u ekaato sida ugu fiican. Qurxinta xirfadleyda ah eeygan waxay ku kici kartaa meel kasta oo udhaxeysa $ 80- $ 200 dhowrkii biloodba mar.
Sababtoo ah noocani badanaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin dhabarka ah waxaa haboon in la maalgaliyo qorshaha caymiska xayawaanka kaas oo dabooli kara habab kasta oo aad ubaahan karto ubaahan inta ay nool yihiin.
Astaamaha Eygan qeexitaankiisu waa sausageeda qaabeeya dhabarka iyo lugaha gaagaaban iyo kuwa adag.
Waxay sidoo kale caan ku yihiin dhegaha dhaadheer ee dhaadheer iyo sanka oo dhibic leh.
Marka taa laga reebo eygaagu wuxuu yeelan doonaa indho aad u ballaaran oo muujiya oo ku dhow inuu wejigooda oo dhan qaato. Si fudud ayaad u aqrisan kartaa Dachshund niyadda badan adoo fiirinaya indhahooda waaweyn ee waaweyn.
Dabadoodu waa toosan tahay waxayna leedahay lakabyo dhumuc leh dhogorta wavy .
Si kastaba ha noqotee eeygan qaybtiisa ugu dhumuc weyn ee dhogorta ayaa ka sarreeya dhegahooda dhaadheer.
Koodhadhkoodu waa inuu ahaadaa waxa kaliya ee ka sooca qashinkan Dachshund.
Qiyaasta cabirka 'Dachshund' ayaa istaagi doonta inta udhaxeysa 8 iyo 9 inji
Waxay culeyskoodu noqon doonaan 16 ilaa 32 rodol.
Mararka qaarkood waad heli kartaa Gunta Yaryar oo yar yar oo yar yar waxay istaagaan oo keliya 5 ama 6 inji oo dherer ah culeyskooduna yahay 11 rodol ama ka yar.
Dachshunds timo dhaadheer leh waxay leeyihiin jaakado dhaadheer oo dhaadheer oo u muuqda lakabyo mowjado qurxoon - timaha ugu dheer uguna dhumuc weyn ayaa laga helayaa dhagahooda.
Koodhka hal eey ee dheer ee ruugga ah ayaa soo gala midabo badan oo kala duwan .
Madow iyo tan ayaa ka mid ah kuwa ugu caansan, oo ay weheliyaan bunni adag. Cadaan kareem, casaan, birta iyo madow adag ayaa waliba suuragal ah.
Si ka duwan Dashshund-ka Xargaha Xiira tarankaani waa mid si layaable u daadinaya. Tani waa sababta oo ah waxay leeyihiin hal jaakad halkii laga heli lahaa jaakad laba jibbaaran. Koodhadhkoodu wali wuxuu ubaahanyahay cadayasho badan si uu gogosha iyo culeyska uga fogaado. Timo jarid ayaa loo baahan doonaa dhowrkii biloodba mar.
A Dachshund Timo dheer ayaa waxyar uun ka duwan Dachshund timo jilicsan.
Waxay ubaahan doonaan qurxin dheeri ah iyo balan salan xirfad leh marwalba mar.
Milkiilayaasha kelida ah iyo qoysaska carruurta leh kama dhigaan mid ku habboon eygan yar ee xasaasiga ah. Tarankaani wuxuu ku kobci doonaa lammaanaha ama dadka wada dagggan guriga. Iyagu maahan eeyga carruurta waana in aan waligood looga tegin ilma yar oo aan lala socon.
Shakhsiyadooda aan la saadaalin karin ayaa noqon kara mid aad u culus oo iyaguba waa in la kiciyo oo firfircoon maalintii oo dhan.
Haddii aad ku raaxaysato qurxinta iyo koolkoolintaada saxafi markaa kani waa dhab eeyga adiga.
Dachshund-kaaga waa inuu helaa qiyaastii 45 daqiiqo oo jimicsi ah maalin kasta.
Waxaad u kala qeybin kartaa waqtigooda hadalka labo 10 daqiiqadood oo socod ah maalintii si eygaagu u qaabeeyo.
Ku hay ubarkaaga xadhigiisa markaad socoto, haddii kale waxay isku dayi karaan inay ka baxaan ka dib wax kasta oo ugaadhsig ah oo ay la kulmaan.
Ciyaarta leash ka baxsan waxaa si badbaado leh loogu sameyn karaa deyr ku yaal aagga.
Tamarta eeygan waxay ku timaaddaa qaraxyo deg deg ah mana joogsan doono ilaa ay ka wada daalaan.
Soo qaad, jiida dagaalka iyo dhuumashada iyo raadinta dhammaantood waa ciyaaro aad u fiican oo lagu ciyaaro madadaalo kalgacal leh oo Dachshund dheer. Noocani waa mid si la yaab leh u dhaqaaqa cabirkooda iyo qaabkoodaba. Waxaad sidoo kale la ciyaari kartaa raadinta iyaga si aad uga caawiso iyaga inay xoojiyaan xirfadaha loo soo saaray.
Kaliya xusuusnow in eeygan uu leeyahay laf dhabar jilicsan sidaa darteed hubi inaadan ka badbadinin jimicsiga.
Wadarta Waxqabadka Maalinlaha: 45 daqiiqo.
Heerka Waxqabadka: 3/5.
Waxqabadka ugu xiisaha badan: Raadinta.
Inkasta oo eeyaha badan ee timo dhaadheer ay yihiin daadiyayaal culus hadana noocani maahan.
Si kastaba ha noqotee waxaad wali u baahan doontaa inaad ilaaliso ballamahooda ballamaha.
Eeyahani waxay heli karaan dermo iyo xanaaqyo - tani waxay noqon kartaa mid aad u xanuun badan markay ka baxaan xakamaynta.
Waa inaad cadayato dhogortooda ugu yaraan saddex jeer toddobaad kasta.
Intaas waxaa sii dheer dhowrkii biloodba mar waa inaad u geysaa xirfadle timo jar ah. Waxay sidoo kale u baahan doonaan in la siiyo maydhasho 2dii ama 3dii biloodba mar. Ka taxaddar inaadan dhaqin marar badan ama waxaad halis ugu jirtaa inaad maydho saliidaha difaaca ee dhogorta eygaaga.
Sidoo kale iska hubi inaadan iloobin ciddiyaha. Ciddiyaha dhaadheer waxay cabsi ku noqon karaan nooc lugo gaaban sidaa darteed cidiyaha eeyahaaga waa in dib loo jaro 2 ama 3 usbuuc kasta.
Helitaanka cuntada saxda ah eey wiener ah way adkaan kartaa.
Waa inaad raadsataa qaacido qaas ah oo ku habboon eeyaha yaryar iyo kuwa firfircoon. Cunnada ugufiican ee tarankaani waa isku dheelitirnaan caafimaad oo borotiin ah, karbooniyo iyo dufan caafimaad leh. Dhammaan nafaqooyinkaas waa in laga helaa ilo dabiici ah iyo kuwa ceeriin.
Waa in la quudiyo 2 koob oo kibble ah maalintii.
Hal koob oo loogu talagalay cuntada subaxdii iyo koob kale galabta waxyar uun ka hor waqtiga ciyaarta.
Cayilku wuxuu masiibo u noqon karaa noocyadan sababtoo ah lafdhabarta jilicsan.
Hubso inaad kaliya siiso iyaga daaweyn aad u yar - waa inaadan siin eeygaaga cunno bini aadam xitaa haddii ay ka codsadaan!
Sidii hore loo sheegay welwelka caafimaad ee ugu weyn ee leh Dachshund Timo Dheer waa lafdhabarta.
Cudurka 'Intervertebral Disc Disease' (ama IVDD) waa dhibaatada caafimaad ee ugu badan ee saameysa eyda wiener. Qaabka lafdhabarta eeyga ee aan caadiga ahayn wuxuu u sahlayaa maqaarkooda 'intervertebral disc' inuu hoos u dhaco.
Nooca 1 IVDD wuxuu dhacaa marka diskku siibto oo uu ku cadaadiyo xudunta lafdhabarta. Kani waa nooca ugu caansan ee saameeya Dachshunds. Tani waxay ku keentaa dhabar xanuun daran, dhaqdhaqaaq la'aan iyo curyaannimo lugaha gadaashooda. Eygaaga ayaa xanaaqi kara oo ku ooyi kara xanuun waxaana laga yaabaa inuusan rabin inuu ordo oo ciyaaro.
Xaaladdan waxaa lagu daaweeyaa jimicsi jireed oo ay weheliso daawo xanuun. Qalliin ayaa looga baahan doonaa kiisaska daran ee aan si fiican uga jawaabin daaweynta.
Arrinta labaad ee caafimaad ee ugu badan eeygan ku xanuunsan karo waa hypothyroidism.
Way adkaan kartaa in la quudiyo eey yar oo firfircoon laakiin hoosta laga xarriiqo waxay u horseedi kartaa hypothyroidism. Xaaladda ayaa sidoo kale laga yaabaa in hiddo ahaan laga dhaxlo.
Eeyaha leh tayroodh aan firfircooneyn ma soo saaraan ku filan hormoonnada loo baahan yahay si jirkoodu si sax ah ugu shaqeeyo. Calaamadaha ugu caansan waxaa ka mid ah miisaanka oo kordha iyo timo lumis.
Nasiib darro tani waa xaalad daba dheeraatay waana in lagu maareeyaa daawo, daaweynta hoormoonka iyo cunno gaar ah.
Mudo intee le'eg ayuu Dachshund Timo Dheer Noolaa?
Tani waa nooc caafimaad oo xoog leh oo ay tahay inuu noolaado 12 illaa 16 sano.
Tababar kan pup rabitaan xoog leh ma fududaan doonto.
Maalmaha qaarkood eeygaagu wuxuu diyaar u noqon doonaa oo diyaar u yahay inuu shaqeeyo. Si kastaba ha noqotee maalmaha kale ma rabi doonaan inay wax uun ku qabtaan tababarka gabi ahaanba.
Waa muhiim inaad adkeysato laakiin aanad xoog ku qasbin marka aad tabobarayso Dachshund-kaaga Timaha dheer.
Sidaan horayba u soo sheegnay waxaad u baahan doontaa inaad si dhaw ula socoto niyadooda oo aad isku daydo inaad dhisto dareen ah is ixtiraam labadiinaba ah mar walba.
Eyga wareersan wuxuu noqon doonaa mid dagaal badan, riix leh oo gabi ahaanba waxba lagama qaban doono.
Iyadoo aan loo eegin sida tababarka niyad jabka u noqon karo waa inaadan waligaa kor u qaadin ama kor u qaadin codkaaga.
Ma jiraan wax dhaawacaya eeygan xasaasiga ah ruuxiisa in ka badan ogaanshaha in milkiilihiisu uusan faraxsanayn.
Marka lagu daro guri dumis iyo tababar aasaasi ah waxaad u baahan doontaa inaad dhexgeliso ardaygan. Ka saar baratankaaga taariikhda taariikheed ee eey iyo dhacdooyinka loogu talagalay eeyaha iyo milkiilayaashooda. Had iyo jeer ku dhowow oo kormeer wixii dhexgal ah eeyaha kale.
Kaliya xusuusnow in kani yahay eey shaqeeya maskaxdooduna had iyo jeer way shaqeysaa.
Waa inaad ku mashquulisaa nashaadaad xiiso leh oo dareenkooda firfircoon ka dhiga.
Qari alaabada lagu ciyaaro ama waxyaabaha lagu daaweeyo hareeraha guriga oo ku dhiirrigeli eeygaaga inuu uriso. Ku daaweynta alaabta lagu ciyaaro buufinta eyga waxay u sahlaysaa eygaaga inuu ugaarsado.
Inta lagu jiro waqtigan ciyaarta waxaad ku tababbaran kartaa eeyahaaga amarradiisa aasaasiga ah intaad wada ciyaareysaan.
Waxaa jira kaliya kala duwanaansho yar oo ku saabsan daryeelka Dachshund Timo Dheer iyo mid timo jilicsan leh. Farqiga ugu weyni waa waqtiga oo dhan oo aad ku bixin doontid adoo ilaalinaya dhogorta.
Dachshund A ayaa ah ciyaar ku filan oo kaa ilaalinaysa adiga oo aan gebi ahaanba kaa daalin. Waxay u yihiin bohol aad u qurux badan milkiileyaasha doonaya cunug cunug ah laakiin sidoo kale qiimeeya waqtiga nasashada.
Tani waa mid ka mid ah saaxiibbada ugu xiisaha badan ee aad heli karto.
Maskaxdooda weyn iyo xitaa shakhsiyadooda ka weyn ayaa milkiilayaashooda ku maaweelin doonta oo la yaabi doona Runtii weligaa ma ogaan doontid waxa eeykan uu ku sii soconayo.
Way kufiican yihiin qofkasta oo raadinaya ilaalin yar oo feejigan.
Haddii aad ballanqaadi karto huun dayactir sare markaa Dachshund Timo Dheer ayaa laga yaabaa inuu kugu habboon yahay adiga.
Sii dhammaantood dareenka ay u qalmaan waxayna noqon doonaan saaxiibkaaga cusub ee ugu fiican.
Noosoo sheeg qaybta faallooyinka ee su aalahaaga midkoodna ...
The Perro de Presa Canario: Kani ma eey qoys fiican baa?
intee in le'eg ayay seexdaan dhallaanku
Jarmal Shepherd dog & Labrador retriever mix
waxa loo yaqaan shih tzu iyo poodle mix
sideen ku garan karaa nooca eeyga aan haysto
intee le'eg ayay qaadanaysaa toy maltese